Bilbila nu jalaa bade/hatame, Fageenya irraa itti bilbiluu(ring), Saamsuu(lock) ykn Qulqulleessuu(Erase or format) gochuufi iddoo inni jiru ilaaluuf: OROMO ICT - OROMO ICT
Kaayyoon Keenya Hubannoo Hawaasa Keenyaa Cimsuudha!
Bilbila nu jalaa bade/hatame, Fageenya irraa itti bilbiluu(ring), Saamsuu(lock) ykn Qulqulleessuu(Erase or format) gochuufi iddoo inni jiru ilaaluuf: OROMO ICT
April 13, 2017 ICT Tutorial, Mobile Tutorial, SMART PHONE, TechnologyAbdisa Bencha Jara
Yeroo ammaa bilbilli jireenya keenya keessatti iddoo olaanaa qabachuu bira darbee gahee guddaa taphachaa jira. Namootni hojii hedduu haala salphaan hojjachuuf dandeessiseera. Hojii xaxamaafi dadhabsiisaa turan haala salphaafi yeroo gabaabaa keessatti akka hojjatamuuf dandii baneera.
Sababa kanaafis Namootni harki irra caalu jireenya isaaniitiif Bilbila wajjiin hidhata cimaa uumuu bira darbanii hanga addaan bahanii jiraachuu akka hin dandeenyetti gahameera. Kunis waa malee miti.
Daldaalaan mana isaa ta’ee odeeffannoo barbaadu argachuufi meeshaa daldalasaatiif isa barbaachisu bilbila isaatiin ajajachuu, odeeffannoo argachuufi dabaltii gatii meeshaalee kkk…. ittiin waljijjiiraa jiru.
Abbaan qabeenyaa mana isaa taa’ee hojiisaa too’achuu, gaaffii barbaadeef deebii kennuu, hojjattoota ajajuufi kkkf hojii dhaabbata sanaa sekondii tokkoof osoo addaan hin cinne akka hojjatamu bu’uura kan ta’e bilbila ta’uun walnama hin gaafachiisu
Kana qofaaree namootni hunduu akkaatuma hojiisaaniitiin bilbila faayidaa garagaraatiif itti fayyadamaa kan jiraniidha.
Yeroo ammaa bilbilli, ittiin bilbilanii fira, maatii, hiiriyyaaafi nama barbaadan wajjiin walqunnamuu qofa osoo hin taane, hojiilee gurguddaa hedduu hojjachuudhaan namoota hedduu hojii isaanii deeggaree jira. Isaan keessaa deetaa adda addaa of harkatti qabatanii akka deeman taasiseera. Suuraalee adda addaa kan qulqullinni isaanii eeggame, kanneen namootni yaadanoof ykn hojiif qabatanii deemaniif kkf namootni bilbilatti qabatanii offaanaan kan deematan hedduudha.
Kanumaan walqabatee akkuma tajaajilli isaa dabalaa deemaa jiru namootnis keessattuu bilbila qafoo Ammayyaawaa(smart phone) tajaajila olaanaa kennu gatii olaanaan bitamu qabachuun baratamaa dhufaa jira. Kanummaarraa ka’uun yeroo ammaa biyya adda addaatti akkasumas magaalaa adda addaatti Saamtotni ykn hattootni xiyyeeffannaa bilbila irra kaa’uun tokko jalaa hatanii nama biraatti gurgurachuun jireenya isaanii guyyaa guyyatti cimanii ummata rakkisaa jiru.
Walumaagalatti, Bilbila keenya yoo hattuun fudhattes ta’ee yoo biyya biraatti irraanfannee dhufne, yoo namni nu bira jiru fudhate jennee shakkine:
Kallattiin itti bilbillee yeroodhuma sana mirkaneeffachuu(Remotely Ring)
Yoo barbaadnes Saamsuu(lock) fi yoo deetaan bilbila sana keessa jiru immoo icciitii namni biraa arguu hin qabne ta’e ykn Deetaa faayidaa dhuunfaa ykn dhaabbata keessan miidhu yknimmoo namni bilbila keessan sana keessaa waan tokko argatee dhuunfas ta’ee dhaabbataafikkf irraa faayyidaa addaa argachuu ykn miidhaa geessuu danda’a yoo ta’e:
Bilbila keenya guutummaasaa qulqulleessuun(Erase/format) gochuun furmaata ta’a jechuudha. Maal kana qofaree, Bilbilli keessan eessa, naannoo kami(Shoe your device location) akka jiru ilaaluus dandeessu
Walumaagalatti, yoo Hiriyyaa keessan ykn isin jalaa bilbilli bade, akkaataa bilbila keessan itti bilbiltanii akka waamu gochuu(ring), saamsuu(lock), qulqulleessuu(erase/format) gochuu fi iddoo ykn naannoo bilbilichi sun jiru ilaaluu dandeessu. Kunis:
Bilbila sanaan eenyummeessaa Google keessan kan seentanii jirtan ta’uu qaba(signed in to Google account). Sana booda mi’a “Android Device Manager” jedhamu fayyadamuun too’achuu dandeenya.
Tajaajilli kun yeroo bilbilli keessan banaa hiruufi SIM of keessaa qabu hojjata
Tajaajila kana argachuuf, dura bilbila keessan eenyummeessaa keessan Google irratti hidhuun* If you’ve linked your phone to Google, you can locate or ring it by searching for find my phone on google.com) barbaachisaa dha.
Yeroo tajaajila kana fayyadamuu feene:
Gara marsariitii dhaabbatichaan fayyadamuu(Use the Android Device Manager website)
Fayyadamaa Bilbila Android fayyadamuu(Use the Android Device Manager app) dandeenya
Lakkoofsa bilbilaa, Fuula mi’a saamsuuf oolutti dabaluu(add phone number to your lost device’s lock screen).
Yoo bilbille keessan isin jalaa bade ykn hatame, namootni bilbila keessan argan yeroo kamiiyyuu bolbiloota adda addaa fayyadamuun akka isiniif bililan gochuu dandeessu, fuula saamsame(lock screen) irraa.
Eenyummeessaa Google keessan Saaqaa(Sign into your Googlr accountcom/devicemanager)
Mi’a lamaa ol yoo qabaattan xiyya maqaa mi’a amma galmeessitanii jirtan duuldura jiru cuqaasuudhan filadhaa.
Saamsi isa jedhu filadhaa(Select Lock)
Iddoo lakkoofsa bilbilaa[dirqalee] barreessinee akka namootni ittiin nu qunnamuu danda’aniif(phon number where you can be reached).
Qabduu Saamsi isa jedhu fialadhaa, ‘Select Lock button’.
Hub: Irraa balleessuf yoo barnbaaddan immoo, tartiiba armaan olii hordofuun irraa balleessi kan jedhu filadhaa(follow the steps above and delete the phone number.).
← Hiriyyoota Facebook Hadoodan(INACTIVE) ta’an yeroo tokkoon tooftaa ofirraa qulqulleessuu/balleessuuf(Deleting Inactive Facebook inactive Friends in Bulk)	Bilbila bade Fageenyarraa itti bilbiluu(Ring), Saamsuu(Lock), Qulqulleessuu(Erase) ykn Faana dhahuu(Track location) →
2 thoughts on “Bilbila nu jalaa bade/hatame, Fageenya irraa itti bilbiluu(ring), Saamsuu(lock) ykn Qulqulleessuu(Erase or format) gochuufi iddoo inni jiru ilaaluuf: OROMO ICT”
Israel Terfasa Debsu says:
gammachuu guddaatu natti dhaga’ame jira. afaan keenyaan odeeffanno barbaachisaa akkasii argachuukootiif guddaa galatoomaa jechaa kan biroos odeeffannoo wayitaawa ta’an nubiraan ga’uuf jabaadhan jedha.
Yaassiin abdullaa says:
Hedduu gaariidhaa jabaadhaa.
Itiyoo Telekoom erga Guutummaasaa>>
Dhaabbatichi ibsa Guutummaasaa>>
Yeroo amma Dhaabbanni Guutummaasaa>>
Yeroo Interneeta Guutummaasaa>>
Jechdarbii hatuu jechuun Guutummaasaa>>
This Year : 71490
Total Hits : 401210
Yeroo amma Guutummaasaa>>